May 29, 2018 By Buzz Myanmar News in အချစ်ဆိုင်ရာ Tags: ခင်ပွန်း, အင်ဂျင်နီယာ
ကျွန်မ ခင်ပွန်း ဟာ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ပါ။ သိပ်ကို အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး အစစအရာရာသည်းခံတတ်သူပါပဲ။
အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက် သူ့ရဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေကို ကျွန်မ ငြီးငွေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အေးဆေးရုံမက အေးစက်လွန်းတယ်လို့ ထင်လာတယ်။ အရင်က သူ့ကိုချစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေနေရာမှာ စိတ်ပျက်မှုတွေပဲ အစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မကို ခံစားချက်တွေ အသားပေးလွန်းသူလို့ ဆိုချင်ဆိုကြပါတော့။ အေးစက်စက်အချစ်မျိုးကို ကျွန်မ မလိုချင်ဘူး။ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရတာကို လိုချင်တယ်။ လှိုက်ဖိုနွေးထွေးတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကို လိုချင်တယ်။ သူက ကျွန်မလိုချင်တာကို မပေးစွမ်းနိုင်ဘူး။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ရင်ခုန်စရာမရှိတော့ရင် ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိတော့ဘူးလို့ ကျွန်မယူဆတယ်။
ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်မ သူ့ကို ပြောလိုက်တယ်။ လမ်းခွဲ ကြပါစို့လို့….
သူက အံ့သြတကြီး မေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့။
“ဒီအိမ်ထောင်ရေးကို ကျွန်မ စိတ်ကုန်နေပြီ။ သည်းခံစရာအကြောင်း မရှိတော့ဘူး” လို့ ကျွန်မဖြေလိုက်တယ်။
သူက ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူး။ တစ်ညလုံး အတွေးတွေနက်နေဟန်နဲ့ စီးကရက် တဖွာပြီး တဖွာရှိုက်ရင်း နှုတ်ဆိတ်သွားတော့တယ်။ သူ့အပေါ် ကျွန်မ စိတ်ကုန်တာကတော့ ပိုတိုးလာတယ်။ ကိုယ့်အကျပ်အတည်းကိုတောင် ထုတ်မပြောတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီကနေ ဘာများ မျှော်လင့်လို့ ရဦးမှာလဲရှင်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူက မေးတယ်။ မင်းစိတ်ပြောင်းသွားအောင် ကို ဘာလုပ်ပေးရမလဲ တဲ့။
လူတစ်ယောက်က အဲသည်လို မေးလာခဲ့ရင် သူ့အကျင့်စရိုက်ကို လွယ်လွယ်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ ထင်လား။ ကျွန်မကတော့ သူ့ကို မယုံတော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ သူ့ မျက်လုံး တွေထဲကို စူးစိုက်ကြည့်ပြီး ကျွန်မ တစ်လုံးချင်းပြောလိုက်တယ်။ “ဒါဆို ရှင့်ကို တစ်ခုပြောမယ်။ ကျွန်မနှလုံးသားကို နားလည်ပြီး ကျေနပ်နှစ်သိမ့်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင် ကျွန်မ စိတ်ပြောင်းမယ်။ ကျွန်မက တောင်ထိပ်ပေါ်က ပန်းတစ်ပွင့်ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် ရှင့်အသက်အသေခံပြီး အဲဒီပန်းကို ရှင်ခူးပေးမလား” လို့။
သူက ပြောတယ်။ “မင်းကို မနက်ဖြန်ကျရင် အဖြေပေးပါ့မယ်” တဲ့။ သူ့စကားကို ကြားပြီး ကျွန်မ မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း ဆိတ်သုန်းသွားတော့တယ်။
နောက်နေ့မနက် ကျွန်မ အိပ်ရာနိုးတော့ သူထွက်သွားပြီ။ ဖန်ခွက်အောက်မှာ စာတစ်စောင် ထားခဲ့တယ်။ “အချစ်ရေ။ မင်းလိုချင်တဲ့ပန်းကို ကိုယ်မခူးပေးနိုင်ပါဘူး။ မခူးပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို ကိုယ်ရှင်းပြပါရစေ…” ပထမဆုံးစာကြောင်းကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မအသည်းတွေ ကွဲသွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မ စာကို ဆက်ဖတ်တယ်။
“မင်း အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွေနဲ့ လုံးထွေးနေရင်း မရှင်းတတ်တော့ စခရင်ရှေ့မှာ မင်းထိုင်ငိုတယ်။အဲဒီပရိုဂရမ်တွေကို ပြန်ရှင်းပေးဖို့အတွက် ကို့လက်ချောင်းတွေလိုတယ်။
မင်းက အမြဲတမ်း အိမ်မှာသော့တွေ ကျန်ခဲ့တယ်။ မင်းထက်အရင် အိမ်ကို စောပြန်ပြီး အိမ်တံခါးဖွင့်ထားဖို့ ကို့ခြေထောက်တွေလိုတယ်။
မင်းက ခရီးထွက်ရတာကြိုက်ပေမယ့် နေရာသစ်မှာ အမြဲလမ်းပျောက်တတ်တယ်။ မင်းကို လမ်းမှန်ပြဖို့ ကို့မျက်လုံးတွေ လိုတယ်။
မင်း ရာသီလာတဲ့အခါတိုင်း အမြဲ ဗိုက်အောင့်တတ်တယ်။ မင်းကျောကလေးကို သပ်ပြီး မင်းနာတာတွေ ပျောက်အောင် လုပ်ပေးဖို့ ကို့လက်ဖဝါးလိုတယ်။
မင်းက အိမ်ထဲမှာ နေရတာ ကြိုက်တယ်။ မင်းပျင်းနေမှာ စိုးလို့ ဟာသတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ ပြောပြရအောင် ကို့ပါးစပ် လိုတယ်။
မင်းက ကွန်ပျူတာကို အမြဲကြည့်နေတော့ မျက်လုံးတွေ ညောင်းတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကို့မျက်လုံးတွေ လိုတယ်။ ဒါမှ တို့တွေ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ မျက်စိမကောင်းတဲ့မင်းကို ကိုက လက်သည်းတွေညှပ်ပေးမယ်၊ ဆံပင်ဖြူတွေ နှုတ်ပေးမယ်။ မင်းလက်ကလေးကို ကိုင်ပြီး ကမ်းနားမှာ လမ်းလျှောက်ကြမယ်။ မင်းကို ပန်းလေးတွေရဲ့အရောင်၊ လေပြည်လေညှင်းနဲ့ ကမ်းခြေရဲ့အရောင်တွေကို ကိုက ပြောပြမယ်။
သည်တော့ အချစ်ရယ်။ ကို့ထက်ပိုပြီး မင်းကို ချစ်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက် မပေါ်လာမချင်း မင်းကို အဲဒီပန်းခူးပေးပြီး ကိုယ်မသေချင်သေးပါဘူး” တဲ့။
ကျွန်မမျက်ရည်တွေက စာပေါ်ကို ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာပြီး စာပေါ်က မင်တွေ ပြန့်သွားတော့တယ်။ စာက မပြီးသေးဘူး။ “အခု ကိုရေးထားတဲ့စာကို မင်းကျေနပ်ရင် အိမ်ရှေ့တံခါးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ မင်းကြိုက်တဲ့ နွားနို့နဲ့ပေါင်မုန့်ကို ကိုယ်ယူလာပြီး အိမ်ရှေ့မှာ ရပ်နေတယ်” တဲ့။
ကျွန်မလည်း တံခါးဆီ အမြန်သွားပြီး ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ စိုးရိမ်နေရှာတဲ့ သူ့မျက်နှာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ လက်ထဲမှာ နွားနို့်ပုလင်းနဲ့ ပေါင်မုန့်ကို တင်းတင်းဆုတ်လို့။
အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်မ သိလိုက်ပါပြီ။ ကျွန်မကို သူချစ်သလောက် ဘယ်သူမှ မချစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မအတွက် တောင်ထိပ်ပေါ်က ပန်းက အရေးမကြီးတော့ပါဘူးရှင်။
ကြှနျမခငျပှနျးဟာ အငျဂငျြနီယာတဈယောကျပါ။ သိပျကို အေးဆေးတညျငွိမျပွီး အစစအရာရာသညျးခံတတျသူပါပဲ။
အိမျထောငျသကျ ၃ နှဈကွာပွီးတဲ့နောကျ သူ့ရဲ့တညျငွိမျမှုတှကေို ကြှနျမ ငွီးငှလေ့ာခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ အေးဆေးရုံမက အေးစကျလှနျးတယျလို့ ထငျလာတယျ။ အရငျက သူ့ကိုခဈြခဲ့တဲ့စိတျတှနေရောမှာ စိတျပကျြမှုတှပေဲ အစားထိုးဝငျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျမကို ခံစားခကျြတှေ အသားပေးလှနျးသူလို့ ဆိုခငျြဆိုကွပါတော့။ အေးစကျစကျအခဈြမြိုးကို ကြှနျမ မလိုခငျြဘူး။ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားရတာကို လိုခငျြတယျ။ လှိုကျဖိုနှေးထှေးတဲ့အခိုကျအတနျ့တှကေို လိုခငျြတယျ။ သူက ကြှနျမလိုခငျြတာကို မပေးစှမျးနိုငျဘူး။ အိမျထောငျတဈခုမှာ ရငျခုနျစရာမရှိတော့ရငျ ဘာအဓိပ်ပါယျမှ မရှိတော့ဘူးလို့ ကြှနျမယူဆတယျ။
ဒါနဲ့ နောကျဆုံးမှာ ကြှနျမ သူ့ကို ပွောလိုကျတယျ။ လမျးခှဲကွပါစို့လို့….
သူက အံ့သွတကွီး မေးတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲတဲ့။
“ဒီအိမျထောငျရေးကို ကြှနျမ စိတျကုနျနပွေီ။ သညျးခံစရာအကွောငျး မရှိတော့ဘူး” လို့ ကြှနျမဖွလေိုကျတယျ။
သူက ဘာမှပွနျမပွောတော့ဘူး။ တဈညလုံး အတှေးတှနေကျနဟေနျနဲ့ စီးကရကျ တဖှာပွီး တဖှာရှိုကျရငျး နှုတျဆိတျသှားတော့တယျ။ သူ့အပျေါ ကြှနျမ စိတျကုနျတာကတော့ ပိုတိုးလာတယျ။ ကိုယျ့အကပျြအတညျးကိုတောငျ ထုတျမပွောတတျတဲ့ လူတဈယောကျဆီကနေ ဘာမြား မြှျောလငျ့လို့ ရဦးမှာလဲရှငျ။ နောကျဆုံးမှာတော့ သူက မေးတယျ။ မငျးစိတျပွောငျးသှားအောငျ ကို ဘာလုပျပေးရမလဲ တဲ့။
လူတဈယောကျက အဲသညျလို မေးလာခဲ့ရငျ သူ့အကငျြ့စရိုကျကို လှယျလှယျပွောငျးလဲနိုငျမယျလို့ ထငျလား။ ကြှနျမကတော့ သူ့ကို မယုံတော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ သူ့မကျြလုံးတှထေဲကို စူးစိုကျကွညျ့ပွီး ကြှနျမ တဈလုံးခငျြးပွောလိုကျတယျ။ “ဒါဆို ရှငျ့ကို တဈခုပွောမယျ။ ကြှနျမနှလုံးသားကို နားလညျပွီး ကနြေပျနှဈသိမျ့အောငျ လုပျပေးနိုငျရငျ ကြှနျမ စိတျပွောငျးမယျ။ ကြှနျမက တောငျထိပျပျေါက ပနျးတဈပှငျ့ကို လိုခငျြတယျဆိုရငျ ရှငျ့အသကျအသခေံပွီး အဲဒီပနျးကို ရှငျခူးပေးမလား” လို့။
သူက ပွောတယျ။ “မငျးကို မနကျဖွနျကရြငျ အဖွပေေးပါ့မယျ” တဲ့။ သူ့စကားကို ကွားပွီး ကြှနျမ မြှျောလငျ့ခကျြတှလေညျး ဆိတျသုနျးသှားတော့တယျ။
နောကျနမေ့နကျ ကြှနျမ အိပျရာနိုးတော့ သူထှကျသှားပွီ။ ဖနျခှကျအောကျမှာ စာတဈစောငျ ထားခဲ့တယျ။ “အခဈြရေ။ မငျးလိုခငျြတဲ့ပနျးကို ကိုယျမခူးပေးနိုငျပါဘူး။ မခူးပေးနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျးကို ကိုယျရှငျးပွပါရစေ…” ပထမဆုံးစာကွောငျးကို ဖတျပွီး ကြှနျမအသညျးတှေ ကှဲသှားသလို ခံစားလိုကျရတယျ။ ကြှနျမ စာကို ဆကျဖတျတယျ။
“မငျး အလုပျလုပျတဲ့အခါ ကှနျပြူတာပရိုဂရမျတှနေဲ့ လုံးထှေးနရေငျး မရှငျးတတျတော့ စခရငျရှမှေ့ာ မငျးထိုငျငိုတယျ။အဲဒီပရိုဂရမျတှကေို ပွနျရှငျးပေးဖို့အတှကျ ကို့လကျခြောငျးတှလေိုတယျ။
မငျးက အမွဲတမျး အိမျမှာသော့တှေ ကနျြခဲ့တယျ။ မငျးထကျအရငျ အိမျကို စောပွနျပွီး အိမျတံခါးဖှငျ့ထားဖို့ ကို့ခွထေောကျတှလေိုတယျ။
မငျးက ခရီးထှကျရတာကွိုကျပမေယျ့ နရောသဈမှာ အမွဲလမျးပြောကျတတျတယျ။ မငျးကို လမျးမှနျပွဖို့ ကို့မကျြလုံးတှေ လိုတယျ။
မငျး ရာသီလာတဲ့အခါတိုငျး အမွဲ ဗိုကျအောငျ့တတျတယျ။ မငျးကြောကလေးကို သပျပွီး မငျးနာတာတှေ ပြောကျအောငျ လုပျပေးဖို့ ကို့လကျဖဝါးလိုတယျ။
မငျးက အိမျထဲမှာ နရေတာ ကွိုကျတယျ။ မငျးပငျြးနမှော စိုးလို့ ဟာသတှေ၊ ဇာတျလမျးတှေ ပွောပွရအောငျ ကို့ပါးစပျ လိုတယျ။
မငျးက ကှနျပြူတာကို အမွဲကွညျ့နတေော့ မကျြလုံးတှေ ညောငျးတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကို့မကျြလုံးတှေ လိုတယျ။ ဒါမှ တို့တှေ အသကျကွီးလာတဲ့အခါ မကျြစိမကောငျးတဲ့မငျးကို ကိုက လကျသညျးတှညှေပျပေးမယျ၊ ဆံပငျဖွူတှေ နှုတျပေးမယျ။ မငျးလကျကလေးကို ကိုငျပွီး ကမျးနားမှာ လမျးလြှောကျကွမယျ။ မငျးကို ပနျးလေးတှရေဲ့အရောငျ၊ လပွေညျလညှေငျးနဲ့ ကမျးခွရေဲ့အရောငျတှကေို ကိုက ပွောပွမယျ။
သညျတော့ အခဈြရယျ။ ကို့ထကျပိုပွီး မငျးကို ခဈြနိုငျတဲ့သူတဈယောကျ မပျေါလာမခငျြး မငျးကို အဲဒီပနျးခူးပေးပွီး ကိုယျမသခေငျြသေးပါဘူး” တဲ့။
ကြှနျမမကျြရညျတှကေ စာပျေါကို ပိုးပိုးပေါကျပေါကျကလြာပွီး စာပျေါက မငျတှေ ပွနျ့သှားတော့တယျ။ စာက မပွီးသေးဘူး။ “အခု ကိုရေးထားတဲ့စာကို မငျးကနြေပျရငျ အိမျရှတေံ့ခါးကို ဖှငျ့လိုကျပါ။ မငျးကွိုကျတဲ့ နှားနို့နဲ့ပေါငျမုနျ့ကို ကိုယျယူလာပွီး အိမျရှမှေ့ာ ရပျနတေယျ” တဲ့။
ကြှနျမလညျး တံခါးဆီ အမွနျသှားပွီး ဖှငျ့လိုကျတဲ့အခါ စိုးရိမျနရှောတဲ့ သူ့မကျြနှာကို တှလေို့ကျရတယျ။ လကျထဲမှာ နှားနိျု့ပုလငျးနဲ့ ပေါငျမုနျ့ကို တငျးတငျးဆုတျလို့။
အခုအခြိနျမှာတော့ ကြှနျမ သိလိုကျပါပွီ။ ကြှနျမကို သူခဈြသလောကျ ဘယျသူမှ မခဈြနိုငျပါဘူး။ ကြှနျမအတှကျ တောငျထိပျပျေါက ပနျးက အရေးမကွီးတော့ပါဘူးရှငျ။